I-Alibaba ithuthukisa ubuhlakani bokufakelwa obuqonda abantu | Izindaba zamagajethi
U-Alibaba udala ubuhlakani bokufakelwa obunokucindezelwa okungcono kokufunda kunomuntu
U-Eder Esteban | | Ubuchwepheshe
Ubuhlakani bokufakelwa buqhubekela phambili ngokuqhamuka nemingcele emakethe. Kukhona ukuthuthuka okuningi nokuthuthuka okunomthelela kulokhu kusengaphambili. Manje, Alibaba imemezela okuthile okubaluleke kakhulu. Inkampani ithi izuzile thuthukisa ubuhlakani bokuzenzela obunokuqonda okungcono kokufunda kunabantu. Kubukeka sengathi kuthole amaphuzu aphezulu kuthuluzi leDataset Answering Dataset.
Kuyinto a ukuhlolwa okukhulu lapho imibuzo eyi-100.000 ibuzwa khona ngabafundi. Izinkampani eziningi emkhakheni onjengeGoogle noma iMicrosoft zisebenzisa leli thuluzi. Manje, i-Alibaba nayo iyisebenzisile ezivivinyweni zayo zakamuva.
Ngokufanayo, imodeli yokufunda yenkampani ithole amaphuzu angama-82,44 amaphuzu esivivinyweni. Isilinganiso sabantu imvamisa sicishe sibe ngamaphoyinti angama-82,304. Ngakho-ke noma umehluko ungemningi, ukwazile ukunqoba lowo mngcele. Ngale ndlela, ubuhlakani bokufakelwa bubonisa inqubekela phambili.
Ngakho-ke, lolu hlelo luvumela ubuhlakani bokuzenzela ukuthi bufunde ngokwabo ukuqonda indlela abantu abakhuluma ngayo. Ngaphezu kokukwazi ukuqonda ukuthi basho ukuthini lapho bebuza imibuzo ethile. Ngakho kubonakala sengathi lo mshini we-Alibaba ungaqonda ukuthi ufundani kangcono kunabantu. Noma, kungukuhlolwa kokuqala.
Yize sibona ukuthi kunezinhlelo eziningi ngokwengeziwe ezingafunda kangcono kunabantu. Isibonelo esihle salokhu yi-AlphaGo. Ngakho-ke lokhu kusondela ku-Alibaba kubhekise kulokhu. Esinye futhi isibonelo sentuthuko eyenzekayo ekuhlakanipheni okufakelwayo.
Okugqame kakhulu ukuthi lokhu kusengaphambili kufinyelelwe yinkampani efana ne-Alibaba ezinikele kwezentengiselwano online. Ngakho-ke ukuthuthukiswa kwalokhu ubuhlakani bokufakelwa obuqonda imibuzo yomsebenzisi kungaba yisikhathi somlando ekusebenzeni kwamakhasimende. Ngakho-ke kuzofanele sinake ukuthi kuguquka kanjani. Ngoba kungasho uguquko emakethe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » U-Alibaba udala ubuhlakani bokufakelwa obunokucindezelwa okungcono kokufunda kunomuntu
UXiaomi uhoxisa isibuyekezo seMi A1 ngenxa yezinkinga zokusebenza